R & R No. 2 - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguTrevor-Jess
Eli gumbi litofotofo likwindawo ethe cwaka kwimizuzu nje eyi- ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya neCedar Rapids kwindlu enembali. Eli gumbi lokulala likumgangatho wesibini wendlu enendawo yakho yokungena ukuze uze uhambe ngendlela othanda ngayo! Igumbi line-microwave, ifriji, i-TV enamajelo asekuhlaleni kunye ne-Bluetooth/i-DVD player. Sinikezela ngee-DVD zokubukela ngoxa usela ikofu okanye iti uze wonwabele izimuncumuncu! Igumbi lokuhlambela lisetyenziswa nangabanye abatyeleli.
Igumbi lokulala elitofotofo elinezinto ezininzi. Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye nezinye iindwendwe. Ifestile ye-AC ehlotyeni kunye nezifudumezi zomntu ngamnye ebusika ukuze iindwendwe zibe nolawulo kubushushu begumbi labo.
4.85 · Izimvo eziyi-157
Ubumelwane obuhle kumbindi wedolophu iFairfax. Sizindlu ezimbalwa kude ne-Star Bar ezonwabele uninzi lweendwendwe zethu. Ubumelwane yimbali- ukuba imozulu intle, hamba uhambe uyonwabele zonke izindlu ezikhethekileyo nezintle zakudala! Sikwayibhloko ekude nepaki enomzila omhle wokuhamba. Indawo ezolileyo ekumgama nje wemizuzu embalwa ukusuka eCedar Rapids!
Umbuki zindwendwe ngu- Trevor-Jess
Ngokuzihlola kunye nokungena ngasese, sinokungasoloko sidibana nawe. Wamkelekile ukuba uhle uze uthi molo nokuba uyafuna. :)